Ukuqoqa isisu 2
Imali yokuhlengikaza yizidakamizwa ezihle kakhulu, okuba izindlela ezengeziwe ekwelapheni izifo ezinde nezikhukhula ezihambisana nokukhwehlela, kanye nokuvimbela lapho ukwelashwa kwemicimbi yasalayo kwenziwa.
Eqoqweni lesifuba ungathola izithako zemvelo kuphela - izinto zokusetshenziswa ezivela emakhambi omisiwe anomile. Kuye ngenombolo yeqoqo, ukwakheka kuhlanganisa isethi ehlukile yamakhambi, ngenomphumela oveziwe. Isibonelo, ukuncelisa ibele 1 kuyaziwa ngamakhemikhali ayo, futhi ngakho-ke kuyasiza ekutheleleni kwebhaktheriya, nokuncelisa ibele 2 kuklanyelwe ukwenza lula ukukhwehlela. Isetshenziswa lapho ukukhwehlela kumanzi, futhi kusiza i-bronchi ukuqeda i-mucus. Kodwa ukukhwehlela akuwona kuphela uphawu olungaphulukisa ukubeletha 2 - yiziphi izakhiwo ezengeziwe ezithathayo ukubuka ukubunjwa.
Izithako zokuncelisa ibele
Ukuvunwa kwesifuba 2 kusuka ekukhwehleleni kuqukethe isethi semithi:
amaqabunga omama nonina-40%;
amaqabunga endala - 30%;
izimpande zelayisensi - 30%;
Lezi zithako ezintathu eziqoqweni zebele zinikeza umphumela we-expectorant, kodwa izakhiwo zamakhambi kufanele zibhekwe ngokucophelela ukuze ziqonde ezinye izimpawu lezi zitshalo ezikwazi ukuphulukisa.
Izakhiwo zezithako - amaqabunga omama nomama
Umama nomama, lapho kungekho khona izindlela ezikhethekile, isetshenziselwa ukuqubuzana njengokweseyi, ngoba unomthelela ophuthumayo, olwavuthayo nokuvuvukala kwegazi.
Amaqabunga alesi sitshalo aqukethe izinto eziningi ezisebenzayo ezisiza umzimba ukuba unqobe lesi sifo.
Ngakho-ke, i-vitamin C ibandakanyeka ekwakheni amangqamuzana omzimba omzimba, insimbi ithuthukisa izinga legazi, i-mucus ithambisa ukukhwehlela, ne-potassium calcium kanye ne-magnesium kusiza imisipha yenhliziyo, okuyinto phakathi nesifo okudinga kakhulu ukusekelwa. Ngakho-ke, amanye amaqabunga omama nonina angathatha indawo eyinkimbinkimbi yonke, uma uthatha umhluzi nsuku zonke.
Ama-infusions avela kumama nomama wesifazane aboniswa ku:
Izakhiwo zezithako - amaqabunga e-plantain
Emaqabunga e-plantain, njengamaqabunga omama nonina, kunezinambuzane eziningi-kufika ku-45%, ezithinta izinga lomuthi. Lesi sici sokubunjwa sisiza ukuhoxiswa kwe-phlegm, okubaluleke kakhulu ukuphola okusheshayo lapho ukhwehlela.
Ngisho nodokotela base-Ancient Greece babhekisela kulesi sitshalo njengesitshalo esingakwazi ukumisa ukuvuvukala, ukuphuma kwegazi, ukumelana nokutheleleka kwebhaktheriya kanye nokutholakala kwezakhiwo ezibuhlungu nokulimala. Ngokuvamile ukukhwehlela okumanzi kusuke kunomile, futhi le ndawo yesitshalo iyakwazi ukuphulukisa ama-microtraumas amathanga alula.
Abantu abanekhwehlela ephelezelwa impumu egijima bayodinga enye indawo ye-plantain - antiallergic. Ngenxa yalokhu, i-edema ye-mucosal iyancipha, futhi ukuphefumula kuzoba mahhala.
I-Plantain iqukethe namafutha amaningi anciphisa inkambo yokukhwehlela.
Izakhiwo zezithako - izimpande zelayisensi
Kuzo zonke izithako zeqoqo leqoqo lezinwele ezimbili, lona nguye odume kakhulu. Impande ye-Licorice yikhambi lokuqala lokulwa nokubandayo ongeke nje ukwelaphe ukukhwehlela kuphela, kodwa futhi livimbele ukubukeka kwalo. Isibonelo, uma ezinsukwini zokuqala zomkhuhlane uthatha isiraphu yezimpande ze-licorice, khona-ke kukhona amathuba okukhwehlela angeke abe khona njengenkinga yesifo.
Ngakho-ke, impande yelayisorice - kude nomuthi omusha wokukhwehlela - wayaziwa ngekhulu lesi-3 BC, njengoba ososayensi bakholelwa. Futhi amakhulu eminyaka lesi sitshalo (licorice), sanikeza abantu izimpande zabo, ukuze bakwazi ukulwa nezifo zendlela yokuphefumula engenhla.
Impande ye-Licorice iyinqubo enamandla yokuzivikela engokwemvelo, ecebile ngama-acids - apula, fumaric, succinic, citric and tartaric.
Izimpande ze-Licorice, njengamanye amakhambi kuqoqo, lusiza imvume ye-bronchi.
Imiyalelo yokusetshenziswa kokuncelisa ingane
I-Breastfeed 2 isetshenziswe njenge-decoction - i-200 ml yamanzi abilayo idinga izikhwama ezingu-1 noma ezimbili zezinto zokusetshenziswa.
Thatha umhluzi kufanele ube izikhathi ezingu-4 ngosuku.
Kungenzeka yini ukuncelisa ukukhulelwa?
Abesifazane abakhulelwe akunconywa ukuthi basebenzise ukubelesa 2 ngoba utshani bomama nonina njengengxenye yempendulo.
Birch tar - application kusuka fungus
Berry berry - izakhiwo eziwusizo ze-irgi zezinto eziphilayo
Amafutha e-Cedar nut - izakhiwo eziwusizo nezokwelapha
Amafutha we-tea e-nail ukhunta
Ijusi le-beet lihle futhi libi kwesibindi
I-Saffron - isicelo
Ukwelashwa komdlavuza ngamakhambi omuntu
I-crayfish evamile - izakhiwo eziwusizo nokuphikisana
I-artichoke yaseJerusalema ene-diabetes mellitus
I-Rhodiola rosea iyi-tincture eyokubeka ezinyaweni zakho
I-Gout - ukwelashwa ngamakhambi abantu
I-Kizil - izakhiwo eziwusizo nama-contraindications, okufanele ukwazi
I-melissa lemon - izakhiwo zokwelapha kanye nokuphikisana
Ungabuyiselwa kanjani emilenzeni?
Granulosa pharyngitis enganeni - ukwelashwa
Imvubelo inhlama nobisi
Iyini inhlanzi futhi "idla"?
Indlela yokulungisa i-laminate odongeni?
Amaprosesa asethempelini yasendlini - ongakhetha kanjani?
I-Royal Palace (Kuala Lumpur)
Umhluzi we-Chamomile wobuso
Yini esiza i-tincture ye-ginger kwi-vodka?
Inkabi ibhaka ekuhlotsheni
Izintshebe eziluhlaza okwesibhakabhaka: abaphathi abakhulu baphulukisa kanjani abafazi babo?
Indlela yokugqoka ukuxoxisana nentombazane?
Ghee kuhle futhi kubi
U-Rihanna nesoka lakhe basesebonke: isithombe
Iwayini elivela ku-irgi - izindlela zokupheka ezidakayo ezenziwe ekhaya
Umlenze wamathawula wephepha